Iindidi zeenkampani ezinamashishini onokumisela eSpain | Ezezimali
Iindidi zeenkampani zemarike eSpain
USusana Maria Urbano Mateos | | Umgaqo-nkqubo wezemali
Kuqhelekile ukuba namhlanje sinengqondo yokuvula ishishini, okanye ukwenza inkampani ibe semthethweni ngokudibeneyo namanye amaqabane oshishino. Kodwa ukuze senze olu hlobo lweshishini lube sesikweni kubalulekile ukuba sisebenzisane, kodwa Buyintoni ubudlelwane? Zeziphi iintlobo zoluntu ezikhoyo? Kweli nqaku siza kuphendula le mibuzo, ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi olona khetho lufanelekileyo ngokweemfuno zakho.
Into yokuqala yokucacisa kukuba zikhona 4 amathuba eenkampani eSpain, inkampani yokuqala esiza kuyicazulula iya kuba yinkampani encinci, emva koko siza kuhlalutya inkampani encinci, njengenxalenye yesithathu esiya kuhlalutya uluntu oluhlangeneyo, kwaye ekugqibeleni siza kuthetha ngobambiswano olunqongopheleyo, okwaziwa ngokuba yintsebenziswano encinci.
1 Limited Inkampani
1.1 Izinto eziluncedo kwiNkampani yeStock
1.2 Ukungancedi kwequmrhu
2 I-Sociedad Limitada
2.1 Izibonelelo zeNkampani ezinMda
2.2 Izinto ezingalunganga kwiNtsebenziswano eMiselweyo
3 I-Sociedad Colectiva
3.1 Izibonelelo zoMbutho oHlangeneyo
3.2 Ukungancedi koMbutho oHlangeneyo
4 Intsebenziswano encinci
4.1 Uncedo loDibaniso oluDibeneyo
4.2 Izinto ezingeloncedo kubuhlulelwano obulinganiselweyo
Inkampani edibeneyo yesitokhwe Enye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu ngaphakathi eSpain, kwaye eyona nto iphambili kuyo kukuba ikomkhulu lenkampani lahlulahlulwe lazizabelo, ezinexabiso lomntu ngamnye, kwaye zinokuhanjiswa ngokukhululekileyo phakathi kwabanini bezabelo ezichaziweyo, ke kwixa elizayo, Inani labantu abanokuthatha inxaxheba kule nkampani alinamkhawulo.
Izinto eziluncedo kwiNkampani yeStock
La Olona thuba luphambili lolu hlobo lweshishini Kuyinyani yokuba kunokubakho inkululeko yokwenza intengiselwano kunye nezabelo ezenza inkampani. Yintoni ekuhambeni kwexesha eza kuvumela inkampani ukuba ifumane abatyali mali abangakumbi, kwaye ikwazi nokuba ukudweliswa kuthengiso lwesitokhwe.
La Ukungathandeki kolu hlobo lwendibaniselwano Yinto entsonkothileyo ekufuneka ikwazi ukudityaniswa phambi kwabasemagunyeni, kuba ifuna iinkqubo ezimbalwa. Kwaye enye into engalunganga kukuba awuzukukwazi ukulawula ukuba ngubani ofumana izabelo zenkampani, oku kubaluleke kakhulu ukuba ucwangcisa ukugcina ulawulo lwenkampani, kwelinye icala, ikwafuna ulwakhiwo olomelele ngakumbi ngenxa yokuntsonkotha kolawulo lwezabelo, kunye nemicimbi ebandakanya oku, njengokuhambisa inzuzo.
Elinye inqaku ekufuneka liqwalaselwe njenge iimfuno zomdibaniso kukuba ubuncinci be-capital yama-60 amawaka e-euro kufuneka ukuba ikwazi ukwenza inkqubo, ikwaqwalasele ukuba i-25% yesixa-mali kufuneka sikhutshwe ngexesha lokwenza inkqubo yezenzo zoluntu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, luhlobo loluntu olunikezela ngezibonelelo ezininzi ukuba isicwangciso sethu kukukhulisa inkampani, nangona kunjalo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba le nkqubo kufuneka yomelele ngokwaneleyo ukuze ikwazi ukuqhuba lonke ulawulo.
Intsebenziswano encinci Luhlobo loluntu oluthandwa ngabaninzi, kwaye izibonelelo ezilunikwa lolu hlobo loluntu zihambelana kakhulu neemfuno zeenkampani ezininzi ezikhoyo. Olunye lweempawu zalo eziphambili kukuba uxanduva lomtyali mali lilinganiselwe kwinkunzi athe wayinikela, eya kuthi imnike inxaxheba kwinkampani.
Eyona nto inomdla ngolu hlobo loluntu kukuba inkampani yamkelwe njengeziko elahlukileyo koosomashishini, ke amatyala kunye noxanduva lwenkampani zizinto ezahlukileyo kubulungisa babo banesabelo kuyo.
Izibonelelo zeNkampani ezinMda
Uncedo lokuqala lolu hlobo loluntu kukuba ubuncinci bemali Ukuze ukwazi ukwenza inkqubo yokudala le nkampani, zi-3 zama-euro, isixa esincinci ngokwenene. Ukongeza koku, ubuncinci bobulungu obufunekayo ngumntu we-1 kuphela.
Omnye we izibonelelo zolu hlobo loluntu Oko kukuthi, ukuba kukho ilahleko kwinkampani, akukho mfuneko yokuba oosomashishini baphendule ngeeasethi zabo, ezivumela ukuqiniseka ngakumbi kwicala lezemali lenkampani kunye noosomashishini abayenzayo, ukunciphisa umngcipheko wokuba utyalomali luthethe eli shishini.
Omnye we izibonelelo zezolawulo, Ewe, zombini iinkqubo kunye neemfuno zilula kakhulu kwaye ziyakhawuleza, ke kufanelekile ukuba into oyifunayo kukuba siqale ukusebenza ngokukhawuleza.
Kumcimbi werhafu, iifestile ezinokuboniswa zanele, okokuqala kufuneka sitsho ukuba iirhafu abazihlawulayo ziphantsi kunalezo zomntu oziqeshileyo, ke esi sisiqalo esihle, kodwa ikwangumvuzo inkampani ngokwayo inokutsalwa njengenkcitho yenkampani, eyenza ukuba ibe nenzuzo enkulu kwezemali ukuba ibe nenkampani kawonkewonke.
Izinto ezingalunganga kwiNtsebenziswano eMiselweyo
Eyona nto iphosakeleyo ngolu hlobo lwenkampani kukuba ukuba inkampani ifuna ukukhula kwaye icele imali eninzi kubatyali mali, le nkqubo ayisiyonto ilula kangako. Ke, ukuba esi sisicwangciso sakho, eyona nto icetyiswayo kukuseta inkampani encinci.
Ngaba igama leshishini elibandakanya igama lomntu, lilandelwa ngu "kunye nenkampani", livakala liqhelekile kuwe? kuba iinkampani ezinolu hlobo lwamagama zi uluntu oluhlangeneyo.
Olona phawu lubalulekileyo loku uhlobo loluntu Kungenxa yokuba luluntu olunobuqu olunemveliso. Oku kuthetha ukuba amaqabane enkampani akazukunikela ngemali kwinkampani kuphela, kodwa kufuneka enze nemisebenzi yezolawulo kwaye enze igalelo ngokwasengqondweni ekufezekiseni iinjongo.
Ngenxa yokuthatha inxaxheba kwamaqabane ngokwawo, imeko ye "qabane" ayihanjiswanga ngendlela elula, kodwa ifuna izivumelwano ezininzi kunye nothotho lweenkqubo.
Nangona kunjalo, kwaye njengoko siza kuxoxa kamva, inempawu yokuba Uxanduva kwinxalenye yamaqabane alunamda, apho kwiimeko ezithile zinokubeka esichengeni iiasethi zakho.
Izibonelelo zoMbutho oHlangeneyo
Olona ncedo luphambili lolu hlobo lobambiswano kukuba amaqabane azinikele ikakhulu ekwenzeni igalelo kungekuphela kwinkunzi yenkampani ukuba isebenze, kodwa kwanolawulo oluthe ngqo kunye nolawulo lwezixhobo zenkampani.
Olunye uncedo lwolu luntu luhlangeneyo kukuba akukho mali incinci yokuqinisa uluntu lolu hlobo. Iinkqubo nazo zilula, ziyakhawuleza kwaye ziyasebenza.
Ngenxa yohlobo lwenkampani kunokwenzeka kwaye kulula ukulawula ukufikelela kumaqabane amatsha, avumela ulawulo olukhulu kwabo banongenelelo ngokuthe ngqo ekusebenzeni kwenkampani.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, nangona inezibonelelo ezininzi, olu hlobo loluntu aluthandwa kakhulu namhlanje.
Ukungancedi koMbutho oHlangeneyo
Eyona nto iphosakeleyo, kwaye eyona idumileyo, kukuba yinkampani enamatyala angenamda, oko kuthetha ukuba amaqabane awazuzisi kuphela kwiinzuzo zenkampani, kodwa bakwanoxanduva lokuphendula ngeeasethi zabo ngexesha elibi ikhampani.
Inqaku le uxanduva olungenamkhawulo Kubaluleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo, kuba nangona izibonelelo zaziwa ngolu hlobo lwenkampani, umda othile wokuqiniseka kwenkampani kufuneka uthathelwe ingqalelo, kuba ukukhankanya inkampani enamathuba aphezulu okuphulukana kunokubeka ukulingana kwethu njengamaqabane emngciphekweni. asethi.
La Intsebenziswano encinci inomdibaniso wentsebenziswano ngokubanzi kunye nentsebenziswano encinci, kwaye iveza izinto ezininzi eziluncedo esinokuzijonga zibaluleke kakhulu xa sithatha isigqibo ngohlobo loluntu esifuna ukulubumba. Ngexesha lokwenza olu hlobo lobambiswano, zimbini iintlobo zamaqabane ezinokuchongwa.
Iqela lokuqala lamaqabane esinokuchonga ngabo banabo uxanduva olungenamkhawuloNgamanye amagama, baphendula ngeeasethi zabo kwintsebenzo yenkampani, kwaye kwelinye icala banoxanduva ngqo lokuqhuba amanyathelo afanelekileyo ukuze bakwazi ukulawula izixhobo zenkampani.
Njengohlobo lwesibini lwamaqabane singafumana abo uxanduva lwabo luthintelwe kwinxalenye yemali eyinxalenye yenkampani, Oko kukuthi, indima yabo yeyamaqabane anoxanduva olulinganiselweyo.
Uncedo loDibaniso oluDibeneyo
Olona ncedo luphambili lolu hlobo loluntu kukuba Akukho mali incinci ifunekayo ukuze ukwazi ukwenza ukubandakanywa kwenkampani. Kwelinye icala, sifumana uncedo olunikezelwa ziinkampani ezinomda kuluntu, kuba ukujoyina amaqabane amatsha yinkqubo elula, ukuba nje iyinxalenye yenkampani ephantsi kolawulo.
Ngokuvumela ii-capital ezingaphezulu kunye namaqabane amaninzi ukuba angene, ukukhula kwenkampani kunokuba kukhulu kakhulu kunezinye iintlobo zoluntu, kwaye oku ngaphandle kwesidingo sokuba abatyali mali abatsha bathathe inxaxheba ebonakalayo kulawulo lwenkampani.
Izinto ezingeloncedo kubuhlulelwano obulinganiselweyo
Zimbini izinto ezingalunganga, eyokuqala kukuba ulwakhiwo, ngokusekwe kwiindidi ezimbini ezahlukeneyo zenkampani, luyinkimbinkimbi kakhulu, ke inkqubo yolawulo kufuneka yomelele ukuze ikwazi ukulawula iintlobo ezimbini zamaqabane kwinkampani enye.
Isiphene sesibini kukuba amaqabane angekho phantsi kolawulo lwentsebenziswano olulinganiselweyo Abanawo amalungelo okuvota kwizigqibo zenkampani, kuba imisebenzi yolawulo idluliselwe kuphela kumaqabane asikelwe umda. Ukongeza, kufuneka siqwalasele ukuba ubunzima bokukwazi ukungena ngaphakathi kumaqabane asikelwe umda buphezulu kakhulu yakuba nje inkampani sele yenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Umgaqo-nkqubo wezemali » Iindidi zeenkampani zemarike eSpain
Yintoni irhafu yokubhalisa?
Yintoni enokwenziwa kwiveki ephelileyo kwintengiso yemasheya?